iPhone 6s Data Recovery: 3 Ụzọ iji weghachite iPhone 6s (Plus) Lost Files
Atọpụ dị oké ọnụ ahịa data bụ nnọọ na-eweta nsogbu ahụmahụ maka ihe iOS ngwaọrụ ọrụ na onye pụrụ ịbụ nnukwu ọnwụ maka ndị na-adabere na ha na klas iche iPad ma ọ bụ iPhone maka azụmahịa. E nweghị okwu mgbe data ọnwụ ga-eme. Ọ na-ewe nanị akụkụ dị nta nke a abụọ ida niile nke gị data. Nke a nwere ike ukwuu izere ma ọ bụrụ na mmadụ maara na-akpata data ọnwụ na mụ anya banyere ha mgbe niile.
Part 1. Top ihe nke data ọnwụ si gị iPhone 6s (Plus)
Onye ọrụ njehie: Otu n'ime ihe ndị kasị akpata maka data ọnwụ bụ na-ekwesịghị ekwesị njikwa nke ngwaọrụ njirimara onwe ya.
Oge ụfọdụ mgbe ke eruba n'ime ihichapụ multiple nchekwa, foto, vidiyo, akụkụ na na, iPhone ọrụ họrọ data na-ekwesịghị-ehichapụ ya ma na-aghọta ya ka e mesịrị mgbe mmebi a na-mere. N'adịghị ka ndị Wepu atụmatụ ugbu a na Android smartphones ebe-ewepụta furu efu data dị mfe, iPhone ọrụ na-adịghị gọzie a bụ isi atụmatụ n'agbanyeghị na elu ịnye ọnụahịa nke handset.
NDỤMỌDỤ: Iji zere bara uru ọnwụ nke data, ọ bụ ihe amamihe ego otu ugboro tupu ị na-enweta biini na akara ngosi na ka ihe ala na gọta ruo mgbe ebighị ebi.
Jailbreak - The Epic ida: Jailbreak bụ a usoro (iwu na-akwadoghị) opted site iPhone ọrụ iji nye ha zuru ohere n'elu ha ngwaọrụ, ya bụ, ihe mgbochi ugbu a na ngwaọrụ ndị na-waived anya ikwe ka onye ọrụ agbanwe ngwaọrụ femụwe site uche.
Dị ka na-akpata ọnwụnwa jailbreak ngwaọrụ gị yiri, ọ bụrụ na bụghị mere nri usoro na oké mkpa anya, nwere ike ejedebe na a nnukwu ọnwụ nke ma data na software na-ahapụ ndị ekwentị na-a igbe nke dị nnọọ sịlịkọn ibe.
NDỤMỌDỤ: Always jide n'aka na-eso nzọụkwụ na a kwesịrị ekwesị ejiji ma ọ bụrụ na ị dị njikere jailbreak ị iPhone 6s gbakwunyere.
iOS usoro nweta nkwalite: ezie ekwe omume nke a na eme bụ obere, ma ụfọdụ nke iPhone ọrụ nwere mkpesa banyere ọnwụ nke data mgbe upgrading ha iOS ka ọhụrụ version.
NDỤMỌDỤ: Always ndabere gị mkpa data Tupu wụnye ọ bụla ụdị femụwe update na kwa na-ngwaọrụ gị ebubo elu nke mere na ọ dịghị agba ọsọ nke ike mgbe ke ufọt otu update.
Ụfọdụ ndị ọzọ na-akpata na-agụnye:
Ngwaọrụ ekpochi site echefu paswọọdụ.
Ọnụnọ nke malware.
Anụ ahụ mebiri.
Part 2. Ụzọ Nile nke ewepụta ehichapụ faịlụ na iPhone
E nwere otu n'usoro nke software dị nke nwere ike inyere a anuri iPhone onye ọrụ na-enyere weghachite furu efu data. Ma onye nke na-eguzokwa iche site na ike na-Wondershare Dr. Fone maka iOS. Ọ dị mfe na-eji software na-enweghị ihe mgbagwoju aka. Ọbụna na nkezi onye na ihe ọmụma nke na-eji a onye kọmputa ike iji nke a software na ala.
Wondershare Dr. Fone nwere nnọọ simplistic imewe na nwere a ngwa ọrụ interface. Ọ na-ewe ihe 4 6 nkeji maka Dr. Fone iji weghachite banyere 2 gigabytes nke data.
E nwere atọ ụzọ nke otu onye nwere ike weghachite furu efu data, nke bụ:
Agbake kpọmkwem site iOS ngwaọrụ.
Agbake kpọmkwem site iTunes ndabere.
Agbake kpọmkwem site iCloud ndabere.
1. Nzọụkwụ abuana ke kpọmkwem na-agbake site iPhone 6s (Plus)
Cheta na: Tupu etinyewe ka n'okpuru kwuru nzọụkwụ, jide n'aka na ngwaọrụ gị na ebubo ruo 50% iji hụ dịghị oge izu ọ bụla.
Nzọụkwụ 1: Jikọọ iPhone na kọmputa na nke Wondershare Dr. Fone arụnyere. Ẹkedori ngwa na jikọọ na ngwaọrụ gị site na nyere eriri USB na-ekwe ka ngwa na-akpaghị aka ịchọpụta ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị na-adịghị ahụrụ, eme ka n'aka gị eriri USB na-arụ ọrụ ya na-ekwesị debara ọdụ ụgbọ mmiri.
Nzọụkwụ 2. Gaa Computer na-ahụ flash mbanye. Emeghe ya na ọdịnaya ke SD kaadị-egosi na n'ihu gị.
Nzọụkwụ 3. Mgbe Doppler zuru ezu, ngwa window ga-egosi gị a ndepụta nke ma ẹdude na-efu data gị iPhone. E mụ otu nhọrọ naanị ngosi ehichapụ ihe na ngwa. I nwekwara ike ịchọ furu efu data site banyere aha ya na search mmanya nyere.
Nzọụkwụ 4. Ebe a ego akara n'akụkụ data ị na-achọ wee pịa "Naghachi" button ikwe ka data ga-azọpụta ndabara na kọmputa gị. N'ihi na data metụtara iMessages, ndetu ma ọ bụ kọntaktị, a ga-enwe otu nhọrọ popping arịọ ma ịzọpụta data na PC gị na ma ọ bụ ozugbo na ngwaọrụ gị.
2. Nzọụkwụ abuana ke agbake data kpọmkwem site iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 1: Open Wondershare Dr. Fone ma họrọ "naputa site na iCloud ndabere faịlụ". Usoro a na-achọ gị ịbanye gị iCloud akaụntụ id na paswọọdụ.
Biko mara na Wondershare gị n'ihe nzuzo na vouches na eziokwu o bụghị edebe ọmụma banyere akaụntụ gị na ndị ọzọ na mkpa data na esichara n'oge sessions.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo ị na-enye achọrọ nkọwa na ihe ịga nke ọma nbanye n'ime akaụntụ gị, ngwa ọnọde niile iCloud ndabere faịlụ jikọrọ akaụntụ gị. Agagharị na ndepụta ma họrọ onye site na nke ị chọrọ iji naghachi gị data site na iti "Download".
Iji belata nbudata oge ahụ, Dr. Fone-enye gị ohere iji họrọ kpọmkwem faịlụ gị mmasị kama nbudata dum faịlụ.
Nzọụkwụ 4: Mgbe achọrọ faịlụ na-ebudatara, ị nwere ike ịme nchọgharị site na ha na nne Mmetụta kaa data ị chọrọ. The data ga-azọpụta ma na PC gị na ma ọ bụ na ngwaọrụ gị dabere n'elu mkpebi gị.
3. Nzọụkwụ naghachi data si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1: Launch Wondershare Dr. Fone mgbake ngwá ọrụ maka iOS ma họrọ mgbake si iTunes ndabere. The ngwa inbuilt iTunes mgbake ndabere ngwá ọrụ ga-chọpụta niile iTunes ndabere faịlụ ugbu a. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị iTunes ndabere faịlụ na ị chọrọ iji naghachi gị data site na.
Nzọụkwụ 2: Ebute Doppler. Ọ bụ ihe amamihe na-enwe ndidi mgbe Doppler etịbe.
Nzọụkwụ 3: Mgbe Doppler zuru ezu, ị ga-nyere na a ndepụta niile data amịpụtara si nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Pịgharịa site na data ma họrọ ndị na-ịchọrọ ị naghachi. Kọntaktị, ozi na data dị ka ndetu nwere ike natara na gị na iPhone.
Wondershare Dr. Fone-ukwuu tụrụ aro ndị na-ewekarị hapụ ha data ọzọ mgbe. Otu mgbe niile kwesịrị ndabere ngwaọrụ data kwa izu iji hụ ngwa ngwa data mgbake zere emefu nza nke oge na-ewepụta na data azụ.
Olee otú Hichapụ Ihe niile na iPhone
Tọgharịa Mmachibido passcode na iPhone
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone 4S ka iPhone 5 n'ime 4 Nzọụkwụ
Best iPhone File Nchọgharị maka Windows (Windows 8 gụnyere)
Otú e si etinye akwụkwọ ahụ aja na iPhone? | Akwụkwọ ahụaja maka iPhone 4S
> Resource> iPhone> iPhone 6s Data Recovery: 3 Ụzọ iji weghachite iPhone 6s (Plus) Lost Files